Toni Kroos oo balan qaad adag sameeyay kahor xili ciyaareedka cusub ee 2019-2020 – Gool FM
(Turin) 18 Luulyo 2019. Xiddiga khadka dhexe reer Germany iyo kooxda Real Madrid ee Toni Kroos ayaa xaqiijiyay in Los Blancos ay diyaar u tahay u dagaalamida tartamada kala duwan ee macquul galka ah xilli ciyaareedka soo socda 2019-2020.
Hadalada Toni Kroos ayaa waxay imaanayaan kaddib wareysi uu ku bixiyay Website-ka rasmiga ah ee kooxda Real Madrid, xili Los Blancos ay ku gudi jirto diyaar garowga xili ciyaareedka cusub .
“Ujeedkeenu waa inaan u dagaalanaa dhamaan tartamada kala duwan, waxaa muhim ah inaan qaabeyno qaab ciyaareedkeena kulamada ugu horeeya”.
Intaas kaddib Toni Kroos yaa wuxuu ka hadlay xusuusta 5 sano kahor marka lasoo bandhigayay isagoo ah ciyaaryahan cusub ee kooxda Real Madrid ah wuxuuna yiri:
“Waxay ahayd maalin aan caadi ahayn, inaan la joogo kooxda ugu fiican ee addunka, waa arrin gaar ah”.
“Waxaan rajeynayaa inaan sii joogo Real Madrid sanado badan, waqtiga si dhaqsi ah ayuu u socday, 5-tii sano ee aan halkan joogay waxay ahayd mid guul ah, waxaana ku guuleystay 3 koob ee Champions League ah”.